Mediterranean Region Arsiv - RayHaber
Pịa na obodo na map ka ị gụọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè Mediterranean, okporo ụzọ na ụgbọ elu ụgbọ ala!
Kahramanmaraş Obodo ukwu na-aga n’ihu na-arụzi ọrụ ya ma na-arụkwa ya n’ụzọ n’okporo ụzọ na-eme ka a na-enweta Yedikuyular Ski Center na Bertiz. Kahramanmaraş Obodo ukwu na-arụ ọrụ asphalt n'otu aka ahụ n'etiti arụmọrụ na idozi ụzọ. [More ...]
Adana Obodo ukwu nke Ndi Okachasi nke Ngalaba Sayensi nke Ngalaba Ulo Oru PTT ulo oru oria Orkide. Ndi Adana Metropolitan Obodo nke Science and Engineering Road Branch Directorate team PTT Ulo oru Orkide Street, [More ...]
Mersin Metropolitan Obodo na-aga n'ihu na mbọ ya iji dozie nsogbu dị n'ụgbọ njem ọha na-abawanye ma bulie ogo na-enweghị nwayọ. Ndị mepere emepe zutere ndị nnọchi anya mpaghara ahụ na ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ nke ndị na-enye ụgbọ njem maka ọtụtụ iri puku ụmụ amaala niile na mpaghara ahụ kwa ụbọchị. [More ...]
Nkwupụta Mmetụta Mmetụta Akparị Ikpeazụ (EIA) nke Kayseri-Nevsehir-Aksaray-Konya-Antalya High Speed ​​Train (YHT), emere 10 na July mkpebi siri ike nke EIA. Usoro ahịrị kilomita nke 4 + 607, nke mejupụtara akụkụ 566, na-ejikọ akụ ọdịnala anyị na ọdịdị, ndụ, akụrụngwa mmiri na ubi ọmụmụ. [More ...]
Mersin mepere emepe rụchara ọrụ asphalt n'ime ime obodo na Mpaghara Mịnịstrị. Metropolitan, Civanyaylağı na n'etiti agbata Camili Dikilitaş agbataobi Hürriyet Street na Kayalar Street edozila nsogbu asphalt na-eche ụmụ amaala ogologo oge. Ngụkọta nke agbata obi abụọ [More ...]
Mkpebi Mkpegharị Mgbakọ Council maka Kırcami Mayor Böcek, "Kırcami abụghị ngwá ọrụ maka ndọrọndọrọ ọchịchị" Mgbe ọgbakọ Mgbakọ Antalya Metropolitan Council Assembly pụrụ iche, Mkpebi K onrcami na 1 / 5000 na 1 / 1000 Master Plan Revised. "Kardzhali abụghị akara aka ụmụ amaala anyị" [More ...]
Ationgbọ njem ọha na Kahramanmaras
Akpa Mpempe na Tarsus nke si na Obodo ukwu
Obodo Mersin mepere emepe akwadola Eid al-Adha na ndị otu ya. Obodo Mersin mepere emepe, nke na-egosi etu o siri metụta mmekọrịta mmadụ n’otu ọ bụla, enyerela ndị njem njem gaa n’ Clọ Ogbe Obodo nke etinyere naanị na mpaghara ụfọdụ dị na Tarsus n’oge ndị gara aga. [More ...]
Uygun nyochara Nurdajects Başpınar na Bahçe Nurdağ Railway Prosion onsite
Onye isi njikwa TCDD Ali İhsan Uygun nyochara ọrụ ndị dị na Başpınar ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ oloko yana ndị otu, ndị ọrụ ngo na ndị ọrụ ugbo bụ ndị mere njem nlegharị anya n'ime oke nyocha. Gaa n’ihu n’etiti Adana na Gaziantep [More ...]
Kahramanmaraş Live Animal Exchange Bus Schedules Amalitere
Ngalaba Na-ahụ Maka Transportgbọ njem Ọhụụ nke Kahramanmaraş kwuru na nkwupụta 6 August Tuesday Live Livestock anụ ụlọ malitere ụgbọ elu ga-aga n'ihu ruo August 10 Satọde. Onu-uzo nke ugbo ala ahu nke na-ano site na nkwụsị nke Kahramanmaraş Obodo ukwu [More ...]
Ingbọchị nhicha na Bbọchị iko na Mersin
E gbochiri ọha ndị mmadụ na Mersin tupu oriri. Ngalaba Na - ahụ Maka Metrogbọ njem Ọchịchị na - ebugharị Ọha na - ahụ maka ndị njem na - arụ ọrụ, ụgbọ njem ọha nke mepere emepe mezuru usoro nhicha na nchacha zuru oke. Cantù nwere ike ịme nhicha oge niile [More ...]
2 Tarsus Kemalpasa Ulo Site na ntanetị na-echekwa Asphalt maka Afọ
Tarsus Kemalpasa Industrial Site 2 afọ chọrọ ma na-eke nnukwu nsogbu maka azụmaahịa, ndị otu Mersin Metropolitan Municipality bidoro imeghe. Na-ekwu na ya na-akwadore ndị ahịa mgbe ọ bụla ọ malitere ọrụ, [More ...]
Ngwọta Smart maka Balance Ọnọdụ na Kahramankart
Ọrụ ụgbọ njem ọha nke Kahramanmaraş Metropolitan, na-agbaso ihe mmepe teknụzụ na-eto ngwa ngwa n'etiti oke nke Transportgbọ njem Smart, ụgbọ njem ọha iji nye ohere maka ụmụ amaala iru tiketi iji kpọtụrụ Kaadị Akpọtụrụ, paymentkwụ NFgwọ NFC (Mobile [More ...]
Ọrụ Asphalt nke Ceyhan na 20 Avenue
Ndi Adeni Metropolitan Ndi Isi Obodo nke Sayensi nke Ngalaba Ala Ala di na Nwunye, Ceyhan District Inonu Boulevard bidoro ndozi ihe. Ibepu okwute n’uzo uzo aga atughari ya n’ime oru. Inonu Boulevard, otu n'ime okporo ụzọ ndị Ceyhan na-ejikarị ụgbọ ala [More ...]
Varsak Bus Terminal Ga-ebu Ndị njem na August
Antalya Obodo ukwu, 3. Sistemụ eji akpa aja aja Varsak-Otogar Line nwere akpa bidoro. Emechara nyocha nke nchekwa ahụ, a na-ezube ịmalite njem ndị njem n'ụdị ahịrị Varsak-Otogar. Emepere ya tupu emecha ule ndị ahụ wee kwụsịtụ ụgbọ elu ahụ [More ...]
Mmezi nke şzọ Ndị Group Kaş
Obodo Antalya na-arụ ọrụ na arụzi yana rụkwaa ya n'okporo ụzọ ndị mebiri emebi n'oge oyi. Sütleğen, Yuvacık, Yayla Çavdır, Yayla Bonito na Çamköy otu ụzọ ejikọtara na Kaş. Ndi otu Ngalaba Na-ahụ Maka Obodo Na Obodo [More ...]
Achọsi ike maka ikuku Taxi na Mersin
A na-ahụ helikopta ahụ, nke Mersin Metropolitan Obodo ma nke a na-ejikarị maka ọrụ nyocha, bụ ụmụ amaala n'ihu ntuziaka nke Mayor Vahap Seçer n'ime oke nchekwa. Air Taxi bidoro ije dịka ụgbọ elu nke mbu na June [More ...]
Njikwa ikuku maka ụgbọ njem ọha na Alanya
Njikwa ikuku ikuku maka ụgbọ ala na Alanya. Ndị otu ndị uwe ojii na ndị njem ụgbọ nke Antalya na-agbafe bọs ọha na ndị njem nke ndị njem n'etiti mpaghara na-aga n'ihu nyocha. Nyocha ahụ na-ele anya kachasị ma elele ma ikuku ikuku dị. Obodo Ukwuu [More ...]
Mersin Metro jidere n’aka Onye isi ala
Mersin Metropolitan Mayor Vahap Selecter, Onye Isi Obodo nke Afyon gara ịga Nzukọ Ọmụmụ lebara usoro a anya. N'ịkọwa ọrụ ndị ha ga-arụ na Mersin, Mayor Seçer nyere ozi ndị dị mkpa gbasara Projectlọ Ọrụ Metro nke bụ mmalite nke ọrụ ndị a. [More ...]
Mut OSB Road na-arụ ọrụ gas zuru ezu
Ewu Mịnịstrị nke mpaghara (OIZ), nke ga-enyere aka na mmepe akụ na ụba nke Mersin na Mut na-aga n'ihu. Mersin mepere emepe, nke na-akwado ọrụ ndị dị nnukwu mkpa maka mpaghara ọrụ, sitere n'aka Mut OIZ [More ...]
Oge ikpeazụ Antalya High Speed ​​Train Project
Emechaala ọkwa ikpeazụ nke Antalya High Speed ​​Train Project. Isi okwu nke ụgbọ ahụ, nke a tụlere na Antalya kemgbe ọtụtụ afọ, etinyere na ọrụ ụgbọ oloko dị elu nke gọọmentị. Otu ejikọtara na Eskişehir site na Afyonkarasihar-Isparta na Burdur, [More ...]